Image Archives - Nawalpur Dainik
May262021 by Nawalpur DainikNo Comments
नायिका केकी अधिकारीकाे लोभलाग्दो सुन्दरता (फाेटाे फिचर)
लोकप्रिय नायिका केकी अधिकारीको चर्चा नेपाली सिने जगतमा लोभलाग्दो छ । पिता बद्रि अधिकारी र माता लक्ष्मी अधिकारीको कोखबाट काठमाडौंको जोरपाटीमा सन् १९८९ को १७ डिसेम्बरमा उनकाे जन्म भएको हो । केकी निकै चन्चल जिज्ञासु स्वभावकी छिन् । केकी एक नेपाली अभिनेत्री तथा व्यावसायिक मोडेल हुन् । उनी थुप्रै नेपाली साङ्गीतिक भिडियो, टेलिभिजन विज्ञापन तथा २ दर्जन बढी नेपाली चलचित्रमा काम गरीसकेकी छिन् । केकीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पूर्व विभिन्न साङ्गीतिक भिडियोमा काम गरेकी गर्दै आएकी थिइन् । केकीले अभिनय गरेका चलचित्रहरु आइ एम सरी, मसान, मायाको बारीमा, महसुस, बितेका पल र कोहलपुर एक्स्प्रेस, छक्का पन्जा ३ मा बलियो अभिनयले सबैको मन लोभ्याएकी छिन । केकीले मानब संसाधन ब्यबस्थापनमा केअफए बिजनेस स्कुलबाट २०१६ मा डिग्री हासिल गरेकी छन् । केकीले स्नातक तह २०१३ मा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पा...
प्राय जसो दक्षिण भारतीय साउथ चलचित्र नेपाली युट्युबको ट्रेन्डिङमा नै परेका हुन्छन् । केही समय पहिले नेपालमा एक नम्बर ट्रेन्डिङमा रहेको फिल्म ‘डियर कमरेड’ले निकै चर्चा कमाएको थियो । उक्त चलचित्रले साता-दश दिनसम्म नेपाल ट्रेन्डिङमा कब्जा जमाएर बसेको थियो । त्यसको मुख्य आकर्षण थिइन् फिल्मकी अभिनेत्री रश्मिका मन्डाना । मोडलिङबाट सिनेमामा प्रवेश गरेकी रश्मिकाको सफलता र लोकप्रियताको असाध्यै छिटोछिटो अघि बढेको छ। सन् २०१६ मा ‘किरिक पार्टी’बाट फिल्मी क्षेत्रमा पाइला टेकेकी हुन् । त्यसपछि उनको लगभग सबै फिल्महरू हिट भए । लगातारका सफल सिनेमाले उनी तेलेगु र कन्नड सिनेमाकी अत्याधिक लोकप्रिय र सर्वाधिक पारिश्रमिक बुझ्ने अभिनेत्री बनिसकेकी छन्।उनले १९ वर्षको उमेरमा सिनेमामा उनको डेब्यू गरेकी थिइन् । डेब्यू पछाडी उनले हालसम्म पछि फर्केर हिँड्नुपरेको छैन। त्यसयता उनी लोकप्रियताको उकाली चढेकोचढ्यै ...
मोडल अञ्जली अधिकारीले यस्तो अवतारमा सार्वजनिक गरिन् तस्बिरहरु (फोटो फिचर)
हरेक दिन जसो उनी म्युजिक भिडियो छायाङ्कनमा व्यस्त हुन्छिन् । व्यस्तताकै बाबजुद पनि उनी सामाजिक सञ्जालमा एक्टिभ भने भैरहन्छिन । प्रायः भिडियो छायाङ्कनका तस्बिरहरूलाई उनले आफ्नो फेसबुक वालमा साझेदार गरिरहेकी हुन्छिन् । यस्तैमा एक म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा उनको कैद भएका तस्विर भने अलि फरक शैलीको छ । हेलमेट लगाएर सारी चोलोमा बोल्ड अवतार दिने प्रयास उनले गरेकी छन् । कालो चस्माले उनलाई बोल्ड देखिन अझै साथ दिएको छ । आकर्षक शारीरिक बनावट र सुन्दरताले भरिएकी अञ्जलीले फिल्ममा पनि अभिनेत्रीको रूपमा प्रयास गरेकी थिइन् । अहिले सर्वत्र चर्चामा रहेको फिल्म ‘प्रेम गीत-३’ मा अभिनेत्रीको खोजी हुँदा उनले पनि अडिसन दिएकी थिइन् । अडिसनमा उनको चर्चा भए पनि सो कार्यमा सफल भने भइनन् । १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ...
Apr142021 by Nawalpur DainikNo Comments
इन्टरनेट मा भाइरल भएकी यी सुन्दरी जसको फिगरले तान्यो संसारको ध्यान – १४ तस्बिर सहित
यी सुन्दरीको नाम हो तहलिया रोवेना जो लण्डनकी चर्चित फिटनेस ट्रेनर हुन् र एक चर्चित मोडल समेत हुन्केही यस्ता सुन्दरीहरु छन् जसको आकर्षक शारी रिक बना’वटले निकै कम समयमा थुप्रो चर्चा कमाउछ्न । यी सुन्दरी पनि यस्तै छोटो समयमा चर्चा पाएकी सुन्दरी हुन् । यी सुन्दरीको नाम हो तहलिया रोवेना जो लण्डनकी चर्चित फिटनेस ट्रेनर हुन् र एक चर्चित मोडल समेत हुन् । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा हट फिगर र ग्लामरस लुक्सका कारण तहल्का मच्चाउने तहलिया रोवेना लण्डनकी चर्चित फिटनेस ट्रेनर तथा मोडल हुन् । रोवेनाले इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेका तस्वीर हेर्दा उनी कुनै सुपर मोडल भन्दा कम देखिन्नन् । तहलियाले निकै कम उमेरमै फिटनेस प्रशिक्षण दिन शुरु गरेकी हुन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार तहलियाले चर्चित सेलिब्रेटीलाई समेत प्रशिक्षण दिइसकेकी छिन् । तहलिया सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । इन्स्टाग्राममा शेयर गरिए...
पूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडाका बाल्यकालका तस्विरहरु भाइरल (तस्बिरसहित )
काठमाडौं – पूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडाका बाल्यकाल का तस्बिरहरु पछिल्लो समय सामाजिक संजाल हरु मा एकदमै भाइरल बनिरहेका छन् ! शृंखला खतिवडा अमेरिकाको हावर्ड वि’श्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्न जाने भएकी छन्। आ’र्किटेक्चरमा स्नातक गरेकी खतिवडाले स्नातकोत्तर गर्न हावर्ड विश्वविद्यालयमा जान लागेकी हुन् । आर्किटेक्चरमा स्नातक गरेकी खतिवडाले सहरी विकासमा स्नातकोत्तर गर्न लागेकी हुन्। गत जनवरीमा आवेदन दिए उनले विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन् गर्न पाउनु जीवनको सबैभन्दा ठूलो सफलता रहेको बताएकी छन् । उनले सुरुमा आफूलाई हावर्डमा सक्छु भन्ने नलागेको भन्दै लकडाउनको फुर्सदमा भने पढ्न इच्छा लागेकाले जसरी पनि आट्छु भनेर लागेको बताइन्। उनले लकडाउन ताका फेरि थप अध्ययन् गर्ने रूची जागेको बताएकी छन् । आँट गरेपछि सिकने उनले बताइन् । दुई वर्षको कोर्स रहेको भन्दै उनले पढाइपछि भने नेपाल नै फर्किने...
एजेन्सी/बलिउडपछि साउथ फिल्म इन्डस्ट्री भारतको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो फिल्म इन्डस्ट्री हो। यहाँ काम गर्ने अभिनेत्रीको लोकप्रियता निकै रहेको छ। साउथ इन्डियन फिल्म पुरा भारतमा मात्र नभई अन्य देशमा पनि निकै चर्चा हुने गर्छ ।बलिउडपछि साउथ फिल्म इन्डस्ट्री भारतको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो फिल्म इन्डस्ट्री हो।जसका कारण पनि चर्चा निकै हुने गर्छ । साउथ फिल्ममा अभिनय गर्ने अभिनेत्रीहरूको बलिउड बजारमा पनि राम्रो माग हुनेगर्छ । जसका कारण उनीहरू फिल्ममा काम गर्न धेरै रकम लिन्छन्। कतिपय अभिनेत्रीको प्रोफाइल बलिउड अभिनेत्री भन्दा पनि धेरै माथि रहेको छ । आज हामी तपाईँलाई साउथ फिल्मका केही महँगा अभिनेत्रीको बारेमा चर्चा गर्दै छौ । १. काजल अग्रवाल: साउथ इन्डस्ट्रीको टप टेन अभिनेत्रीमा काजलको नाम सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । हालै उनले बिजनेसम्यान गौतम किचलूसँग बिहे गरेकी हुन्। उनले तमिल, तेलुगु सहित हिन्दी...
पोखरा- नेपाली अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई नचिन्नै सायदै भेट्न गाह्रो होला । १४ वर्षको उमेरदेखि फिल्म खेल्न सुरु गरेकी करिश्माले ४६ बसन्त पार गरिसकिन् तर उनको सुन्दरतामा भने कुनै कमी छैन् ।पछिल्लो समयमा करिश्माले दैनिक सामाजिक सञ्जालमा राख्ने तस्विरहरुले पनि ढल्किँदै गएको उमेरमा उनको सुन्दरता बढेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । करिश्माले १ वर्ष अगाडी एसएलसी परिक्षा उत्तिर्ण गरेकी हुन् । २०७५ सालको एसईई परिक्षार्थी भएर करिश्माले बी प्लस ल्याएर उत्तीर्ण गरेकी थिइन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठन गरेको नयाँ शक्तिमा पार्टीमा लागेर राजनीतिमा प्रवेश गरेकी करिश्माको राजनैतिक जीवन भने सफल हुन सकेन । त्यसैले उनले २०७६ सालमा पार्टी छाडेको घोषणा गरिन् । धेरै नेपाली नायिकाहरु यस क्षेत्रबाट पलाइन भैरहेतापनि करिश्मा पनि यसमा टिकेर बसेकी छिन् । करिश्माले आफ्नो स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई...
Mar252021 by Nawalpur DainikNo Comments
१६ तस्वीरमा हेर्नुहोस् मोडल मुनाको बोल्ड अवतार ! फोटो फिचर
जीवनशैली, पत्रपत्रिकाबाट, फोटो फिचर, हेडलाइन
मोडल तथा कलाकार मुना गौचनको अभिनय रहेको फिल्म ‘जालो’ ले खासै चर्चा कमाउन सकेन । यो फिल्मले मुनालाई चर्चा दिलाउन नसके पनि मोडलिङको दुनियाँमा भने उनी लोकप्रिय छिन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय रहने गर्छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले शेयर गर्ने तस्वीरले फ्यानको मन जितेको हुन्छ । केही विज्ञापनमा समेत अभिनय गरेकी मुना ‘मिस इको नेपाल २०१९’ विजेता पनि हुन् । सामाजिक सञ्जालमा मुनाले बोल्ड तस्वीरहरु शेयर गर्ने गर्छिन् । हेरौं उनका केही तस्वीरः #१ #२ #३ #४ #५ #६ #७ #८ #९ #१० #११ #१२ #१३ #१४ #१५ #१६ #१७ यो पनि पढ्नुहोस: आन्टी भएर हराउन्न, नायिका रेखा थापा………. रेखा थापा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकि एक चर्चित अभिनेत्री र तथा र्निमात्री हुन् । सन् १९९९ मिस नेपालमा सहभागी भएर उनी उत्कृष्ट दस मा पर्न सफल भएकी थिइन् । २ वर्ष पछि उनले छबी रा...
वलिवूड नायिकालाई समेत पछि पार्ने नेपालका यी नायिकाहरु हेर्नुस तस्बिर सहित
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नव नायिकाहरुको कमी छैन । नायिकाहरुको कुन बेला चर्चा हुन्छ र कुन बेला बिवाद हुन्छ भन्ने अत्ताेपत्ताे हुदैन् । तीमध्ये कतिले चलचित्र क्षेत्रमा सुरुवातमा नै सफलताको स्वाद चाखेका छन् भने कति संघर्षकै क्रममा छन् । नायिकाहरुले आफनो पहिलो प्रयासमा नै दर्शकको मन जिते छन् । कतिले अभिनयमाफर्त त कतिले सुन्दरतामार्फत । तीनै नायिकाहरुलाई कतिले बलिउड नायिकाहरुसंग तुलना पनि गर्छन अभिनयको हिसावले होईन रुपको हिसावले । ती नायिकाहरुलाई धेरैले बलिउड नायिकाको उपनाम दिएका छन् । दिपिका प्रसाई:- एश्वर्य फेम नायिकाले आफनो डेब्यु चलचित्रबाट नै चर्चा कमाईन । फैसन इन्डष्ट्रीमा चिरपरिचित नायिका दिपिकालाई दर्शकले पहिलो चलचित्रबाट नै वच गरेका थिए । उनलाई धेरैले बलिउड सोनम कपुर भनेर टिप्पणी गर्छन । उनलाई बलिउडकी सोनम कपुर भनेर यस क्षेत्रमा मात्र होईन स्कुल कलेजदेखि नै सोनम कपुर ...
Mar232021 by Nawalpur DainikNo Comments
पत्रपत्रिकाबाट, फोटो फिचर, विचार/ब्लग, हेडलाइन
काठमान्डौ : कुनै हलियुड कि मोडल भन्दा कमि छैनन् नेपालि चेली मुना गौचन एक उदाउदै गरेकी नेपाली मोडेल हुन् । उनले मोडेलिङ्ग क्षेत्रमा नेपालमा राम्रो स्थान हासिल गरेकी छन् । सहायक पात्रको भूमिकामा समेत मुना गौचनले काम गरिसकेकी छन्। उनले चपली हाइट २ मा नै पहिलो सहायक भूमिका निर्बाह गरेकी हुन्। सिने क्षेत्रमा भन्दा उनि नेपालमा मोडेलकै उपनामले परिचित छिन्। उनि मिस इको इन्टरनेशनल २०१९ हुन् भने क्लासिक डाइमन्डको ब्रान्ड एम्बेसेडर समेत हुने। उनले बियूटी पीजेंट्स अन्तर्गत विभिन्न विधामा पुरस्कार जितिसकेकी छिन् भने विभिन्न र्याम्प वकमा सहभागिता रहेकी छिन। विभिन्न समयमा उनले विभिन्न तस्बिर इन्स्टामा सार्बजनिक गरिरहेकी हुन्छिन।चलचित्र ‘जालो’ नामक चलचित्रमा अभिनय गरेकी मुना गौचन मोडलिङको दुनियाँमा लोकप्रिय नाम हो। उनले अभिनय गरेको फिल्म ‘जालो’ त खासै चलेन तर मुनाको चर्चा भने फिल्म वृत्तमा राम्रै भ...